စာမူခေါ်ခြင်း – ခိုးငွေ့ သူငယ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » စာမူခေါ်ခြင်း – ခိုးငွေ့ သူငယ်များ
စာမူခေါ်ခြင်း – ခိုးငွေ့ သူငယ်များ
Posted by kai on Jan 24, 2011 in Editor's Notes | 40 comments
“ခိုးငွေ့ သူငယ်များ” ခေါင်းစဉ်(အကြမ်း)နဲ့ ဓ်ါတ်ပုံများရဲ့အက်ဆေးတပုဒ် . ၂၅ဒေါ်လာနဲ့ .. ၀ယ်မယ်ဗျာ..။
… လူတွေကြားထဲ..ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က အသက် ၁၈နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်ဓါတ်ပုံ (၁၀)ပုံလောက် ပါချင်တယ်..။
သူတို့ …ဘာကြောင့်သောက်ရသလဲ..။ ဘယ်သူ့ဆီက အတုယူသလဲ။ ဘယ်သူသင်ပေးသလဲ..။ သောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်သလဲ.. ဘယ်လိုဆေးလိပ်(စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်..)အမျိုးအစား…တံဆိပ်ကြိုက်သလဲဆိုတာလေးတွေပါ မေးခွန်းမေးပေးစေချင်တယ်..။
တလ အချိန်ပေးပါမယ်..။ အေးအေးဆေးဆေး… ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါ..။ အောက်မှာ အဲဒါနဲ့ဆိုင်တာကို လိုချင်တာ..ဖြည့်ချင်တာ.. ဆွေးနွေးရေးပေးကြပါ..။
စာမူကိုတာဝန်ယူလိုသူတွေ.. သက်ဆိုင်တဲ့ပုံတပုံလောက်အစမ်းရိုက်ပြီး .. အက်ဆေးတိုလေးနဲ့ ၀က်ဆိုက်မှာ တင်ပေးကြည့်ပါ။ အဲဒီကနေ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ရွေးချယ်ပါမယ်။ လုပ်နိုင်မဲ့ သတင်းသမား၊ဂျာနယ်လစ် များရှိရင်လည်း ဒီကိုညွှန်းပေးလိုက်ပါ။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် .. နောက်ပိုင်း ..ဒီလို ပုံမှန်လုပ်သွားပါ့မယ်..။ ဒီစာမူခေါ်ဖြစ်သွားအောင် .. ဆွေးနွေး ရေးခဲ့ကြတဲ့.. ရွာသားတွေကို ကျေးဇူးနော..။
လေယဉ်လက်မှတ်ဖိုး အသွားအပြန် ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် တပိုဒ်မက ဆယ်ပိုဒ်တောင် ရေးချင်သည်။
စာရေးဆိုရင်ရေးစရာတစ်ပုံကြီး ဆေးလိပ်ကိုဘယ်လို ဘာကြောင်ကြိုက်ဆိုတာ လုပ်ဘူးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံကတော့ မရိုက်ချင်ဘူး။
ကလေးဆေးလိပ်သောက်တာ မြန်မာပြည်မှာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ဆေးပေါ့လိပ်သောက်ခဲ့လို့ရယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ကလေးတွေ လမ်းဘေးက ကလေးတွေ ပိုများတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံရိုက်တာမကောင်းဘူးထင်တယ်နော်။ တချို့ဆို ၁၀ နှစ်ကလေးတွေ သောက်တာလည်း မြင်ဖူးတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် သူများအတွက် ထိခိုက်မှုရှိမယ်ထင်တယ်။
ကလေးတယောက် လူကြားထဲ ဆေးလိပ်သောက်ပြနေရင် ..သူ့ကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်ေ၇ာ ..အဲဒါကို မြင်တဲ့ .. ကလေးတွေရော ထိခိုက်သွားတာ .. အရမ်းများပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့် .. အဲဒီလိုကလေး.. ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး .. ပညာပေးတခုခု.. လူကြီးတွေ စဉ်းစားတတ်အောင်တခုခု မီဒီယာကတဆင့်ပေးလိုက်နိုင်ရင်… ကောင်းမှာပါ..။
ကလေးဆိုသည်မှာ .. လူကြားထဲ..ဆေးလိပ်သောက်ရင်.. ဘ၀တသက်တာ .. အရှက်ကွဲပါလား..ဆိုတာကိုလည်း. သိသွားစေချင်ပါတယ်..။
အဲဒီကလေးကို ..ဆေးလိပ်တဗူးလက်ဆောင်ပေးပြီး .. ရိုက်ခဲ့ပေါ့..။
မျက်နှာကို .. ဖျက်ပြီးမှ ဓါတ်ပုံတင်လည်း ရတာပါပဲ..။ ကိုကြောင်ကြီးပြောသလို … နောက်ကခိုးရိုက်လည်း ..ဖြစ်တာပဲ..။
အင်တာဗျူးကတော့ .. တူ၊တူမတွေကတဆင့် .. ကျောင်းက ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ကလေးတွေကို မေးခိုင်းလိုက်လဲဖြစ်ပါတယ်…။
လိုချင်တဲ့ အချက်က ..
ဘာလို့ ..သောက်တာလဲ..။ ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်လို့လား..။
မိဘ၊ဆရာတွေက ဘာမှမပြောလို့..ကျမ်းမာေ၇းထိခိုက်..၊ဘေးလူထိခိုက်တာ မသိတာလား..။
ဈေးကွက်ထဲဆင်းရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အဆွယ်ကောင်းလို့လား။
အောက်မှာ ..၀က်ဘ်ဆိုက်တချို့ တင်ပေးထားတယ်..။
တို့ ခလေးတွေက ဆေးလိပ်တင် မဟုတ်..
ကိုယ်တုံးလုံချွတ်လေးတွေနဲ့.မဲမဲတူးတူး ကောင်လေးတွေ..
ဆေးလိပ်လေး လက်ကြားညှပ် ပြီးဖဲရိုက်နေကြတာ..ကိုယ့်ထက်ချရာကျနေပါလားလို့ ..
အစီစဉ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ … ။ဒါပေမဲ့လည်း အပေတေလေးတွေသာ ဆေးလိပ်လက်ကြားညှပ်ပြီး အရွယ်မတိုင်ခင်သောက်တတ်နေတာလေ…..။ ကိုယ်က ဓါတ်ပုံလည်း သွားရိုက် ၊ အင်တာလည်း ဗျူးမယ်ဆိုရင် … ကံမကောင်းရင် အဆဲခံရကိန်းရှိတယ် … ။ သိတဲ့အတိုင်း သူတို့က အရိုင်းစိုင်းလေးတွေများတာကိုး ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က (12/13လောက်ပဲရှိဦးမယ် )ဆေးလိပ်သောက်တတ်တာဗျ အဲဒါဆေးလိပ်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိတယ် တင်ပေးမယ်လေ။ ဆေးလိပ်သောက်တာ ရီဝေေ၀နဲ့ မူးတဲ့ အရသာလေး ကိုကြိုက်လို့ ပြီးတော့ ပါးစပ်က စုတ်ဖွာလိုက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေ နှာခေါင်းထဲက ပြန်ထွက်လာတာ သဘောကျလို့ သောက်ဖြစ်တာဗျ ။ စီးကရက် ကနေသောက်တာ အိတ်စ်ပို့ ဒူးယား လို့ခေါ်တဲ့ ဆွမ်းအုပ်တံဆိတ်နဲ့ ဒူးယား ကိုကြိုက်တယ်။ တစ်လိပ်မှ ပြားလေးဆယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျောင်းခန်းထဲကို မီးညှိ ပြီးသား စီးကရက်ကို ကွန်ပါဘူးခွံ ထဲထည့်ယူပြိး သောက်တာ မီးခိုး ပျောက်သောက်တာ ဆိုတော့ ပိုမူးတာပေါ့ ။ အနံ့ လည်းပိုပြင်းတယ်။ ကောင်မလေးတွေနား ကပ်မသွားရဲဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တာ ဆရာမ တိုင်မှာစိုးလို့ ။ ခု ကလေးတွေကိုတော့ ဆရာမလုပ်ရဲပါဘူး။ အင်တာလည်းမဗျူးရဲဘူးနော့ ။ ကိုယ့်တုန်းကတော့ ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့………
ဟုတ်ပြီဟေး…. စာမူအတွက် ဦးနီကို ဗျူးလို့ရပြီ ဟိဟိ.. ပုံတွေလည်းရမယ်ဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ လမ်းဘေးသောက်တဲ့ကလေး လိုက်မေးရင် အုတ်ခဲကျိုးစာ မိနေဦးမယ်…..
ဗျူးစရာမလိုဘူးတော့ဘူးလေ။ ဗျူးမဲ့မေးခွန်းတွေလည်းဖြေပေးပြီးသားပဲ။ ဘာလို့သောက်တာလဲ ဘယ်ဆေးလိပ်ကြိုက်လဲ ဆိုတာတွေကို အဲဒိကနေနဲနဲပါးပါး ထည့်ရေးလိုက် ဒီကနေဓါတ်ပုံတင်လိုက်မယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်လမ်းကြောင်းတွေ ပျက်ကုန်တော့မှာဘဲနော
ဒီလိုဘဲ ကလေးတွေကို ပေါက်လွှတ်ပဲစားဆိုပြီး လွှတ်ထားကြစတမ်းဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ တစ်ချိန်လုံး တိုင်းရေးပြည်ရေးတွေ
ဘာမှ အသုံးမကျဘူးဆိုတဲ့သဘောကို သက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာမပေါ်အောင် နောက်၊ဘေးကနေ ခိုးရိုက်ပေါ့ဗျာ။
ဦးကြောင်ကြီး ကဗျာမဟားဒရား မိုက်ဒယ်ဗျာ………..
သူကြီး ဘာရည် ရွယ်ချက်နဲ့ ဘာကြောင့်လို ချင်ပီး ဘယ်မှာသုံးမလဲပြောပြပေးနိုင်မလား
ပြည်တွင်းဂျာနယ် တခု က သတင်းထောက် ညီမလေး တယောက်က $25 ရ ရင် လိုက်ဗျူးပေးမယ်တဲ့ ကာရကံရှင်ကို တော့ ဘာအတွက်ဆိုတာ ပြော ပြ သင့်တယ်ထင်လို့တဲ့
ဒီလိုလုပ်တာဟာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အမြင်ထွက်အောင်… ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း .. Negative Point of Viewကဖြစ်စေချင်ပါတယ်..။
အိပ်နေတဲ့ခွေးပုံတို့..။ နောက်ဖေးလမ်းကြားတို့..။ အမှိုက်ပုံတို့..၊ ကျီးကန်းတို့နဲ့ တွဲရိုက်နိုင်လေကောင်းလေပေါ့..။
နောက်ပိုင်းလည်း .. ဒီလိုမျိုးရွာသားတွေရေးတဲ့ထဲက .. အိုင်ဒီယာကောင်းတာလေးတွေကို .. စာမူခေါ်သွားဖို့..ရည်ရွယ်ထားပါတယ်..။
ရွေးတဲ့စာမူကို မန္တလေးဂေဇက်မှာ သုံးမှာပါ..။
အဲ့ဒီအဖွားမသေခင်က အင်တာဗျူးထားရမှာ … သူဆို ဆေးလိပ်အကြောင်း တော်တော်သိမှာပဲ ။
ဟုတ်တယ် ဘာအတွက်လဲဆိုတာပြောပြသင့်သလိုပဲ ဒါမှ စိတ်ချလက်ချရေးလို့ရမှာပေါ့
ရှေးလူကြီးတွေကတော့ ဖက်လိပ် ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးတွေ သောက်ကြတာဘဲ။ အရင်က ဓါတ်ပုံ ဟောင်းတွေမှာဆို ဇိမ်ယူပြီး ဖွာနေတာတွေ တောင် မြင်ဘူးတယ်။ သဂျီး ရွာထဲမှာ မောင်းခတ်ပေမဲ့ သဂျီး အလုပ်ကို လက်မခံကြဘူး ဇြစ်နေတယ်။
အင် တာ ဗျုး တာ နောက် မှ … လိုက် ရိုက် လို. ပြေး ရ မှာ အ ရင် …
အယ်ဒီတာဦးခိုင်ပြန်စာ မပြည်စုံလို့ အယ်ဒီတာချုပ်ဦးကြောင်မှ ဖြည့်စွက်လိုက်သည်။ စာမူအရွေးခံရရင် မန်းဂေဇက် ပုံနှိပ်စာစောင်မှာ ဖော်ပြပေးပါမည်။ စာစောင်ကော်ပီကို http://www.mandalaytube.com/media.php?type=document မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ စာမူတင်ရာမှာလည်း အစမ်းသဘောမျိုး သုံးပုံတပုံလောက်ကိုသာ မန်းဂေဇက်အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အယ်ဒီတာဆရာခိုင် မြည်းစမ်းဖတ်ရှုပြိး တဆင့်တင်ပြလိုက်သော စာမူများကို အယ်ဒီတာချုပ်မဟာကြောင်မှ အပြီးသတ် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ စာမူခ ၂၅ဒေါ်လာသည် အခွန်မဖြတ်ခင်၊ နှစ်၂၅ အရစ်ကျပေးမည့် ပမာဏဖြစ်သည်။ မန်းဂေဇက်သည် ယူအက်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တရားဝင်မီဒီယာဖြစ်သောကြောင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအခွန်တော်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခွန်တော် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တော်အခွန်တော်၊ ဘာဘာညာညာအခွန်အခများနှုတ်ပြီး စာမူခကို တလုံးတခဲတည်းထုတ်မည်ဆိုလျင် ၅၀%အသာလေး ကျန်မည်ဟု အာမခံသည်။ တလုံးထခဲထုတ်ငွေ (၂၅x၀.၅x၀.၅= ၆.၂၅ဒေါ်လာ) သို့မဟုတ် အရစ်ကျထုတ်ငွေ (၁x၀.၅=၀.၅ဒေါ်လာ) ကို ဟွန်ဒီငွေလွှဲခြင်းမှတဆင့် ( ၃% ထပ်မံဖြတ်) သို့မဟုတ် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB မှတဆင့် (၁၀%ထပ်မံဖြတ်) လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍စာမူရှင်သည် နယ်မြို့တွင်နေပါက ပြည်တွင်းငွေလွှဲခကို ထပ်မံဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက မန်းဂေဇက်တယ်လီဖုံးသို့ တိုက်ရိုက်အိုဗာစီးကောခေါ်၍ မေးမြန်းနိုင်သည်။ (ပီဖင်းဂိုးဖြင့်ခေါ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်းဖြင့်မေးခြင်း၊ လူကြုံခိုင်းခြင်းများသီးခံပါ)။
ဓါတ်ပုံတွေကို ခွင့်တောင်းခံပြီးမှ ရိုက်တာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။အသုံးပြုမယ့်ပုံများမှာ မျက်နှာကို မှုန်ဝါး ပေးခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံး နေရာမှာ ဖျက် ထားပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်လဲ အသုံးပြုခွင့် ပေးလို၏ ၊မပေးလို၏ ဆိုတာ ကာယကံရှင်ရဲ့သဘော ထားခွင့်ပြုချက်ကို တစ်ပါတည်း ရယူသင့်ပါတယ်။ ( တစ်ချို့က ဓါတ်ပုံ ကြည်ကြည်သာသာ အရိုက်ခံပေမယ့် အသုံးပြုဖို့ သဘော မတူတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်)
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ (၁၈)နှစ်အောက် မြန်မာကလေးငယ်များမရှိပါ။
မလေး ကလေးငယ်တွေတော့ရှိပါတယ်။ဓါတ်ပုံ ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အိုက်တင်မျိုးစုံနဲ့ အရိ့က်ခံမဲ့ကောင်တွေပါ။ဒါပေမယ့် အသုံးပြုဖို့အတွက် မိဘတွေ ဆီမှ ခွင့်တောင်းရန်သင့်မသင့်။လိုအပ်သည် ၊မလိုအပ် သိချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ နီးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတိုင်းလိုလို ဆေးလိပ်သောက်ကြတာ မှတ်မိနေပါတယ် …. အခုခေတ်တော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိတော့ပါဘူး …
တစ်လဆိုတာ နောက်ဆုံးရက်ကိုသိပါရစေ။ အခွင့်သာရင် တင်ပေးပါမည်ဆရာ။
ဆိုတော့ .. မရမချင်းးဆက်ဖွင့်ထားမှာပါပဲ..။
ရရင်တော့ .. ကြေငြာပါ့မယ်..။
(ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ နီးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတိုင်းလိုလို ဆေးလိပ်သောက်ကြတာ မှတ်မိနေပါတယ် …. အခုခေတ်တော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိတော့ပါဘူး …)အဲဒိတုန်းက ဆေးလိပ်မီးလာတောင်းတာ တားတားလေ မှတ်မိတော့ဘူးလား ဆရာzawana ……….
ပြောချင်ရာပြောကြသူတွေ ဘာကြောင့်ကလေးတွေဆေးလိပ်သောက်ကြသလဲ….။ ကလေးတွေ ဘာကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ကြသလဲ….။
ဆေးလိပ်ထက်ပိုဆိုးတာက ခြင်နိုင်ဆေးခွေမဟုတ်ဘူးလား။ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ထဲမှာ ခြင်တွေ ကျကျပြီးမသေပါဘူး။ ခြင်နိုင်ဆေးခွေထွန်းထားရင် ခြင်တွေကျကျပြီးသေပါလေရော။ ကလေးပေါက်စနကိုကအစ ဘေးနားမှာ ခြင်ဆေးခွေထွန်းပြီး သိပ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံက TV ထဲမှာပါ ကြော်ငြာနေတာလေ။ ဆရာမဂျူးရဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာက ခြင်ဆေးခွေ တစ်ခွေဟာ (ဘာဓာတ်လဲမသိဘူး) စီးကရက်အလိပ် ၅၁ လိပ်စာနဲ့ညီမျှပါတယ်တဲ့။ ခြင်ဆေးခွေက ဒုက္ခပိုပေးတယ်လို့ အခိုင်အမာရေးထားပါတယ်။ ဒီလို အသိမျိုးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တောင် လတ်တလော ဘေးအန္တာရာယ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးကိုကြောက်ရလွန်းလို့ ခြင်ဆေးခွေထွန်းမိပါတယ်။ ခြင်ကိုနိုင်ဖို့ကတော့ မလွယ်ရေးချမလွယ်။ ငွေအင်အားနဲ့လည်း အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်က ဒုက္ခပေးမပေးတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့် အဘွား ပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကို မသေမချင်းသောက်တာ အသက် ၁၀၅ နှစ်မှဆုံးတာပါ။ ဒါက ခေတ်မီဆေးတွေဝါးတွေမပါဘဲ ရိုးရိုးကြီး လိပ်သောက်တာမို့လား မသိဘူး။
ဟုတ်တယ်.. ခြင်ဆေးတွေကလည်း ပြသနာ.. အဲဒီ ကိစ္စ ၀ိုင်းတွေးကြရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဆူး ၉ တန်း ၁၀တန်း လောက်တုန်းက ညည စာကျက်ရင် ခြင်ဆေးခွေကလေး ထွန်းပြီး ကျက်တယ်။ နောက်ပိုင်း ခြင်ဆေး အနံဆို လုံးဝ မခံနိုင်တော့ဘူး အနံ ရတာနဲ့ လည်ချောင်းထဲ နာလာတော့တာဘဲ။ ဖြန်းဆေးတွေ ဆိုလည်း ရှူမိရင် ရင်တွေ တုန်ပြီး ဖျားတော့တာဘဲ။ အဒေါ် က ဆို ညဉ်းက ခြင်သေလို့ ၀င်စားတာ ဖြစ်မယ် ခြင်ဆေး အနံ မခံနိုင်တာလား ခြင်တွေ သေကုန်မှာ စိုးလို့ ဥာဏ်ဆင်တာလားတဲ့။ အပြောခံရတယ်။
ခြင်ကလည်း ၅တန်း လောက်ကတည်းက မရိုက်တော့တာ ဆိုတော့.. ခြင်တွေ ၀ိုင်းတွယ်ရင် အ၀တ်တခုခု အနားမှာ ထားပြီး ပုတ်နေရတယ် လက်တဖက်က ခြင်ပုတ် မပုတ်ချင်ရင် လမ်းထလျှောက် အဲဒီလို လုပ်ရတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဆေးလိပ်သောက်နေကြတဲ့ကလေးတွေရော လူကြီးလူငယ် အစုံကို နေ့တိုင်းကုမ္ပဏီမှာတွေ့နေတာပဲ မေးကြည့်ရင်တော့ အဖြေက တစ်ရာမက တစ်ထောင်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ် တစ်ချို့တွေက 14၊15နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် အရက် ၊ ဆေးလိပ်၊ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် (လိင်တောင်ဆက်ဆံဖူးကြတာ) ဓါတ်ပုံတော့မရိုက်ချင်ပါ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရိုက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်ကို ဘာကြောင့်သောက်လဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ….။ ဒီစာမူကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးမှာပါလဲ သိခွင့်ရရင် သိပါရစေလား..။
ကဲကဲ.. ကျွန်တော်လဲ နဲနဲ ၀င်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ 25 ဒေါ်လာ တော့ ဟုတ်ပါတယ် အခွန်ကောက်ခံမှုတွေ အဆုံးမှာ အိပ်ထဲကတော့ မထုတ်ရဘောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော် ဒီအစီစဉ်လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ အဦးဆုံးပြောခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပြောသလို ကိုယ့်ပေါင်ကို လှန်ထောင်းသလိုမျိုးဖြစ်နေမလားပေါ့ ဒါပေတီး ဒါက ကျန်မာရေးပိုင်းအတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကူညီတာလည်းရောက်ပါတယ် ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေမှာ ဆေးလိပ်သောက်တာ အရမ်းများလာပါတယ် ကိုယ်သော်ဇင် ပြောသလို တစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းမှာ အဖြေအမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်ပါတယ် အချိန်ခါမှီမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံလေး ရိုက်ပြီး ဗျူးထားတာလေး ၀င်ရေးမိမှာပါ 25 ဒေါ်လှတော့ စိတ်ထဲ မထားပါဘူး ရမှာလဲ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် အခွန်တွေ တွက်လိုက်ရင် ကိုယ့်လူမျိုး ကျန်းမာရေး ကောင်းစားရေးအတွက် ရေးသင့် ကြပါတယ်ဗျာ ပုံကိုတော့ ကျွန်တော် ခဲပေါက်ခံပြီး ရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ် ကျွန်တော် အဆင်ပြေရင်ပေါ့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရွာသူရွာသားတို့ရေ။
ဘယ်သူ့ဆီကမှ … ကမ်းလှမ်းတာ မရောက်လာတာမို့ .. ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော..။
အိုက်ဒီခါကြရင်တော့ ခြင်တွေ လက်ကုန်များတယ်
ဆေးရွက်ကြီးကို စက္ကူသတင်းစာနဲ့ လိပ်ပြီး
ရှုပြီး မှုတ်ထုပ်တာကနေ စပြီး
ဆေးလိပ်သောက်တတ်တာလည်း တစ်မျိုးပါဝင်ပါဒယ်လို့ 
စာသင်ကျောင်းမှာဆို ဆရာနဲ့ တပည့်က ရဲဘော်ရဲဘက်
ရွာထည်းမှာဆုံရင် ဆရာကတပည့်စီမှာ တပည့်ကဆရာစီမှာ ဆေးလိပ်မီးညှိမယ်
အစီခံပါတဲ့ စီးကရက်တွေကို ရှိုးထုပ်ပြီးသောက်တယ်
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောရင်ဝိုင်းရီးတယ်
တစ်ကယ်ရောဂါဖြစ်တဲ့လူလဲရှိတယ် ဥပမာ ပန်းနာရင်ကျပ်
တဟွပ်ဟွပ် တခွပ်ခွပ်နဲ့ 
ဘယ်သူမှကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မသိကြဘူး
စီးကရက်တို့ ကွမ်းယာတို့ ဆိုတာတွေက ဆိုင်ရဲ့ ဒက်ကရေးရှင်းတွေလိုဖြစ်နေတယ်
စာမူတောင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က ကောင်းပါတယ် … ခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံကလေးတွေ ဆေးလိပ်သောက်နေတာက အထူးအဆန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး … ဘာလို့သောက်တယ် ဘယ်သူ့ဆီက အတုယူတယ်ဆိုတာကလည်း ပြောဖို့ခက်ပြန်ရော … လူတစ်ယောက်က သူ့စိတ်နဲ့သူပဲလေ … ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ နိုင်ငံခြားကားတွေတော်တော်များများမှာ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အခန်းတွေပါတာပဲ … ဒါတွေကို ကလေးတွေကြည့်ပီး သောက်ချင်သောက်မယ် .. တစ်ခုပါပဲ .. ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ … အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ကလေး နဲ့ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ကလေး ဒါကွာမယ် … ပီးတော့ လက်တည့်စမ်းပီး သောက်တာလည်းပါမယ် … ခုဆို ကျနော်တို့ ဂိမ်းဆိုင်ကို အထက်တန်းကလေးတွေ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ ဂိမ်းလာဆော့တယ် … ပီးတော့ မှာလိုက်ရင် ဆေးလိပ်ဆိုတာချည်းပဲ … ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျနော်တို့ ရောင်းပေးရတာပဲ … အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သူများ ဆေးလိပ်မသောက်ရဆိုတာ တရားဝင်ကြေငြာထားပါတယ် … ဒါပေမယ့် အဲဒါ စာရွက်တစ်ခုပါပဲ … တစ်ကယ်လည်း သူတို့ ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်နိုင် မတားဆီးနိုင်ကြပါဘူး … လမ်းမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ် အမှိုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေ ဆေးလိပ်သောက်နေတာကို … ဘယ်သူတွေကများ တားဆီးကြလို့လဲ … ဘယ်သူမှ မတားဆီးပါ … အချိန်မရလို့လား ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်အသက်ကို တန်ဖိုးမထားကြတာလား … အဲ့ကလေးဟာ အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ကလေးမို့လို့လား … ကျနော့် အမြင်ကို ကျနော် ဆွေးနွေးသွားပါတယ် …
အင်တာဗျူးတာရဲ့အဓိပါယ်က.. ကလေးရဲ့သဘောထားအမှန်ဖြစ်ကြောင်း… မီဒီယာအရ သက်သေထူတာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်..။
မသိမသာ ဖြတ်မေးပီး…သူ့သဘောအမှန်ကို ရယူသွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ..။ လူကြိးရဲ့.. စဉ်းစားတွေးခေါ်ဥာဏ်နဲ့.. ဖြည့်ရေးတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေချင်ပါ…။
သိပ်ရှည်ရှည်စာတွေမလိုပဲ.. ဓါတ်ပုံနဲ့အချက်အလက် များများပေးပေးပါ..။ နေရာသိပ်မရှိလို့ပါ…။
၁၀ရက်ကနေ.. ၁၅ရက် အချိန်ရပါမယ်..။